Iska-horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay oo maanta ka dhacay magaalada Galkacyo. – Radio Daljir
Galkacyo, Oct 29 – Dagaal xooggan oo gaystay khsaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa maanta ka dhacay magaalada Galkacyo gaar ahaan suuqa weyn ee Bagaaashka iyo bakhaarrada ganacsiga.
Dagaalkaan ayaa bilowday kadib markii bambaanooyin lagu weeraray ciidanka ammaan ee Puntland ee magaalada Galkacyo oo hawlgal ka samaynayey, howl-galkaasi oo ku aaddanaa bannaynta waddooyinka dhex mara suuqa weyn ee magaalada Galkacyo.
Bam-baanooyinkaasi ciidanka lala beegsaday ayaa sababay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira, waxaana kadib xaaladdu isku badashay dagaal labada dhinac isku adeegsadeen qoryaha darandooriga u dhaca.
Dagaalkaan oo soconayey muddo kooban, ayaa u dhaxeeyey ciidamada ammaanka ee Puntland iyo ciidamo kale oo la sheegay in ay taabacsan yihiin maamula Galmudug, waxaana la tilmaamayaa in ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud Xaaji Xasan oo isaga laftiigiisa firirro dhaawac ka soo gaareen bam-baanooyinkii saakay, ayaa sheegay in la soo weeraray ciidankooda iyagoo ku guda jira hawlgallo waddo bannayn ah, taas oo uu ku tilmaamay daandaansi iyo gardarro caddaan ah waa sida uu halka u dhigaye.
Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa haatan deggan mana jiraan wax dhawaqa rasaasta ah oo laga dareemayo gudaha suuqa weyn oo ah halkii maanta wax ka dhaceen, mana jiraan wax waan-waan ah oo xiisadda lagu qabooyinayo oo illaa haatan bilaabatay.
Darraad ayey ahayd markii hawlgallo noocaan oo kale ah oo ay wadeen ciidanka ammaan ee Puntland lagana fulinayey isla suuqaasi weeraro lagu carqaladeeyey, taas oo iyada laftigeedu gaystay is rasaasayn dad ku dhintay kuwo kalana ku dhaawacmeen.